डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस् ➵ डेलीमोशनबाट kk भिडियोहरू, १p०p भिडियोहरू, HD भिडियोहरू, उपशीर्षकहरू, थम्बनेलहरू, पोस्टरहरू, फिल्मस्ट्रिप, ट्यागहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
तपाईं पुरानो संस्करण प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। पछिल्लो संस्करण स्थापना गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् 1.0.5
डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
❝डेलीमोशनबाट भिडियोहरू उत्तम गुणमा डाउनलोड गर्नुहोस्❞
➶ डेलीमोशनबाट kk भिडियोहरू, १p०p भिडियोहरू, HD भिडियोहरू, उपशीर्षकहरू, थम्बनेलहरू, पोस्टरहरू, फिल्मस्ट्रिप, ट्यागहरू डाउनलोड गर्नुहोस्।
भिडियो युआरएल प्रतिलिपि गर्नुहोस् र माथिको बक्समा टाँस्नुहोस्, तब डेलीमोशन डाउनलोडरले भिडियो तुरून्त फेला पार्नेछ। डाउनलोड लिंकमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस् र डेलीमोशन भिडियोहरू स्थानीय डिस्कमा बचत गर्नुहोस्।
साधारण डेलीमोशन डाउनलोडर
यो एक्स्टेन्सनले तपाईंलाई डेलीमोशनबाट भिडियोहरू र थम्बनेल डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। डेलीमोशनबाट K के भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
डेलीमोशन भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने
हामी तपाईंसँग उच्च गतिको इन्टर्नेट जडान भएको बेलामा एचडी डेलीमोशन फिल्महरू हेर्न सक्दछौं। जे होस्, कहिलेकाँही तपाइँले HD भिडियो हेर्न आवश्यक छ। यस डेलीमोशन HD भिडियो डाउनलोडरले तपाईलाई HD भिडियोहरू MP4 HD क्वालिटी गुमाउन बिना नै गुणवत्ता बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
डेलीमोशन भिडियोको URL प्रविष्ट गर्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्।
Chrome विस्तार र फायरफक्स एड-अनको साथ डेलीमोशनबाट नि: शुल्क डाउनलोड भिडियोहरू
डेलीमोशन वेबसाइट खोल्नुहोस्।
डेलीमोशनमा भिडियो प्ले गर्नुहोस्।
यो विस्तार खोल्नुहोस्। ➥ अब स्थापना गर्नुहोस्
यूट्यूब जस्तै, डेलीमोशन एक लाखौं सक्रिय दैनिक उपयोगकर्ताहरु को साथ एक व्यापक प्रयोग भिडियो शेयरिंग वेबसाइट हो। डेलीमोशनले प्रयोगकर्ताहरूलाई ट्यागहरू, च्यानलहरू वा प्रयोगकर्ताले सिर्जना गरेको समूहहरूको लागि खोजी गरेर भिडियोहरू ब्राउज गर्न र अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईं संगीत, कार्टुन, चलचित्रहरू सहित निःशुल्क भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ ...
डेलीमोशनका लागि भिडियो डाउनलोडर
अब, कुनै पनि समस्या बिना नि: शुल्क डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्न यत्ति सजिलो छ।
बहु दैनिक भिडियो भिडियोहरू डाउनलोड गर्नुहोस्
डेलीमोशन भिडियोहरू ब्याचमा एकै समयमा डाउनलोड गर्नुहोस्। एक क्लिकको साथ डेलीमोशन भिडियो प्लेलिस्ट वा च्यानल डाउनलोड गर्नुहोस्।
डेलीमोशन थम्बनेल डाउनलोड गर्नुहोस्
डेलीमोशन थम्बनेल पूर्ण आकार 1080p डाउनलोड गर्नुहोस्।
बहु भिडियो ढाँचा समर्थन गर्दछ
डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडरले विभिन्न भिडियो स्वरूपहरू उत्पन्न गर्दछ: 4K 2160p, अल्ट्रा HD 1440p, पूर्ण HD 1080p, 854p, HD 720p, 640p, 480p, 380p, 256p, 240p, 144p रिजोलुसन, २66 केबीपीएस mp3।
खोज पट्टीमा कुञ्जी शब्दहरू टाइप गर्नुहोस्, सम्बन्धित डेलीमोशन भिडियो देखा पर्ने छ। यी साधारण उपकरणहरूको साथ अफलाइन प्रयोगको लागि तपाईंको मनपर्ने डेलीमोशन भिडियोहरू बचत गर्नुहोस्।
तपाईं निःशुल्क रूपमा चाहानु भए जति भिडियो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। १००% सफा र सुरक्षित छ कुनै प्रकारको भाइरस बिना प्रयोग गर्न तपाईको डेस्कटप वा ट्याब्लेटमा प्रवेश गर्ने जब तपाइँ भिडियो लिंक डाउनलोड गर्नुहुन्छ।
डेलीमोशन डाउनलोडर गुगल क्रोम, फायरफक्स, आईई, ओपेरा, सफारी, माइक्रोसफ्ट एज, यूसी ब्राउजर र कुनै पनि वेब ब्राउजरमा राम्रोसँग काम गर्दछ। थप रूपमा, यो म्याक अपरेटिंग प्रणालीसँग अत्यधिक उपयुक्त छ।
सरल र छिटो
सजिलैसँग र गुणवत्तामा कुनै नोक्सानी बिना नै सुपर द्रुत डाउनलोड गतिको आनन्द लिनुहोस्। हामीले यस डेलीमोशन डाउनलोडरलाई यत्तिको सजिलो बनाउनको लागि सक्दो प्रयास गरेका छौं।
तपाईंले दर्ता गर्न वा कुनै जानकारी प्रदान गर्न आवश्यक पर्दैन।
यहाँ तपाईंको प्रश्न र उत्तरहरू फेला पार्नुहोस् - कसरी तपाईं डेलीमोशन भिडियो बचत गर्नुहुन्छ?
+ के म डेलीमोशनबाट मेरो आफ्नै भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
डेलीमोशनबाट तपाईंको आफ्नै भिडियो डाउनलोड गर्न यो सम्भव छ। डेलीमोशन खोल्नुहोस् र तपाईंको भिडियो अपलोड गर्नुहोस् र केही मिनेटमा यसले तपाईंको भिडियोको लागि यूआरएल उत्पन्न गर्दछ, युआरएलको प्रतिलिपि बनाउँनुहोस् र डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर खोल्नुहोस् त्यसपछि पाठ बक्समा URL टाँस्नुहोस् र डाउनलोड बटन क्लिक गर्नुहोस्।
+ म कसरी डेलीमोशन अनुप्रयोगबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्छु?
हाम्रो वेबसाइट पनि तपाईको मोबाइल फोनसँग साँच्चिकै अनुकूल छ, तपाईले आफ्नो स्मार्टफोनको माध्यमबाट भिडियो डाउनलोड गर्ने प्रक्रिया पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं मोबाइल अनुप्रयोगबाट डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। डेलीमोशन भिडियोमा नेभिगेट गर्नुहोस्, प्ले क्लिक गर्नुहोस्, विकल्पहरू क्लिक गर्नुहोस्। त्यसो भए डेलीमोशन भिडियोको URL प्रतिलिपि गर्नुहोस् र माथिको इनपुट बक्समा टाँस्नुहोस् र डाउनलोड क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं मोबाइलमा डेलीमोशन भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईं कसरी डेलीमोशन अनलाइनबाट भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
+ तपाईं कसरी मेरो म्याक कम्प्युटरमा डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ?
तपाईंको वेब ब्राउजरको शीर्षबाट भिडियोको लिंक प्रतिलिपि गर्नुहोस्, त्यसपछि माथिको इनपुट बक्समा टाँस्नुहोस्। डाउनलोड क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो वा अडियो फाइल तुरुन्तै तपाईंको म्याक पीसीमा डाउनलोड हुनेछ।
+ के डेलीमोशनलाई एमपी3अडियोमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ?
उत्तर हो हो। हाम्रो अनुप्रयोगले स्वचालित रूपमा भिडियो डाउनलोड गर्दछ र फेरि एमपी3अडियो फाइलमा रूपान्तरण गर्दछ।
+ एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा डेलीमोशनबाट भिडियोहरू कसरी डाउनलोड गर्ने?
पहिले फायरफक्स ब्राउजर स्थापना गर्नुहोस्, त्यसपछि डाउनलोड लि Daily्क डेलीमोशन भिडियोहरू भन्ने एक्सटेन्सन स्थापना गर्न तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईंको उपकरणहरूमा डेलीमोशन अनुप्रयोग चलाउनुहोस्, तपाईंले डाउनलोड गर्न चाहानुभएको भिडियो प्ले गर्न ट्याप गर्नुहोस्। प्रदर्शनको ठीक तल सेयर आइकनमा ट्याप गर्नुहोस्। क्लिपबोर्डमा प्रतिलिपि छनौट गर्नुहोस्।
फायरफक्स ब्राउजरमा नयाँ ट्याब खोल्नुहोस्। क्लिपबोर्डबाट डेली बारमा वेबसाइट पहुँच गर्नुहोस् ठेगाना बारमा URL टाँस्नुहोस्।
केवल तीन थोप्लाहरूमा ट्याप गर्नुहोस्, त्यसपछि मेनुमा डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड ट्याप गर्नुहोस्। डाउनलोड विकल्पहरूबाट गुणस्तर र ढाँचा छनौट गर्नुहोस्।
+ आईओएस उपकरणहरूमा आईफोन (आईफोन, आईप्याड) लाई अफलाइन डेलीमोशन भिडियोहरू कसरी हेर्नुहोस्?
डेलीमोशनको मद्दत केन्द्रमा तपाईंलाई भिडियोहरू अफलाइन हेर्न एक मार्ग देखाउँदछ, भिडियो मेनू खोल्नको लागि तीनवटा थोप्लाहरूमा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि अफलाइन हेर्नुहोस् ट्याप गर्नुहोस्। जे होस्, यी भिडियोहरू मेटाउन अघि 30० दिन मात्र भण्डारण गर्न सकिन्छ। यो सुविधा IOS उपकरणहरूमा मात्र काम गर्दछ (न्यूनतम आईओएस requires आवश्यक छ) र एन्ड्रोइड नेटिभ अनुप्रयोगहरू। त्यसोभए यस समयमा, मानिसहरूले सोच्दछन् कि त्यहाँ त्यस्तो कुनै तरिका छ कि जसले डेलीमोशन भिडियोहरू हाम्रा मोबाइल उपकरणहरूमा डाउनलोड गर्न सक्दछ?
+ डेलीमोशन भिडियो प्लेलिस्ट कसरी डाउनलोड गर्ने?
डेलीमोशन प्लेलिस्ट वा च्यानलहरूमा भिडियोको ब्याच डाउनलोड गर्न तपाईंले ब्राउजर एक्स्टेन्सन स्थापना गर्नु पर्छ।
+ डेलीमोशन अनलाईनबाट म कसरी प्रतिबन्धित वा निजी भिडियोहरू डाउनलोड गर्ने?
यदि तपाईंले डेलीमोशनमा केहि रोचक भिडियोहरू फेला पार्नुभयो, र तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड वा सिधा तपाईंको यन्त्रहरूमा रूपान्तरण गर्न चाहानुहुन्छ, तर भिडियो प्रतिबन्धित वा निजी भिडियो हो। तपाईंले डेलीमोशनमा साईन ईन गर्न आवश्यक पर्दछ र त्यसपछि भिडियो डाउनलोड लिंक फेला पार्न क्रोम वा फायरफक्स एक्सटेन्सन खोल्नुहोस्।
+ डेलीमोशनबाट म कति दिन भिडियो डाउनलोड गर्न सक्छु?
हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको वेबसाइट बनाउनु हो जुन तपाईको मनपर्ने भिडियो अनलाइन डाउनलोड गर्न मञ्चका साथ सबै उपयोगकर्ताहरुलाई प्रदान गर्न सकिन्छ। तपाईं डेलीमोशन वा अन्य भिडियो साझेदारी वेबसाइटबाट कुनै पनि भिडियोहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ सीमाको बारेमा चिन्ता नगरिकन। यो नि: शुल्क हो र डाउनलोडमा कुनै गोप्य नियम र सर्त छैन।
डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर - भिडियो अफलाइन हेर्न उत्तम तरिका
5 प्रयोगकर्ताहरूले मूल्या .्कन गरे
यदि तपाईं अफलाइन हुँदा पनि भिडियोहरूको आनन्द लिन आशा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसो भए यो अनलाईन नि: शुल्क डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर एक उपयोगी विकल्प हो। यसको द्रुत डाउनलोड प्रक्रियाका लागि धन्यवाद तपाईं तपाईंको सुविधाको लागि नयाँ भिडियोहरू डाउनलोड गर्न र हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
भिडियोहरू डाउनलोड गर्नु त्यति सजिलो भएको छैन किनकि कहिँ पनि दर्ता नगरी तपाईं डेलीमोशन भिडियो हच्न सक्नुहुन्छ। म छक्क परें किनकि मेरो मनपर्ने भिडियो मिनेटको केही अंशमा डाउनलोड हुन्छ।
डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडरको इन्टरफेस सरल र सहज छ। म सबै डेलीमोशन भिडियो प्रेमीहरूलाई यस उपकरणको सिफारिश गर्दछु।
डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर एक सफा, मनमोहक स्पार्स ईन्टरफेस र सुविधाजनक ब्राउजर एकीकरणको साथ एक राम्रो डाउनलोडर हो। म यसलाई पूर्ण हृदयले सिफारिस गर्दछु।
यो एक उत्तम भिडियो डाउनलोडर हो जुन मैले प्रयोग गरेको छु। यो एक धेरै सजिलो र सुविधाजनक अनुप्रयोग हो जुन तपाईं विभिन्न भिडियोहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले यस विस्तारलाई मेरो स्मार्ट टिभीमा हेर्न 4k भिडियोहरू डाउनलोड गर्न प्रयोग गरें। यो राम्रोसँग काम गर्दछ।
यो तपाइँको पीसी वा मोबाइलमा डेलीमोशन भिडियोहरू डाउनलोड गर्न उत्तम अनलाइन डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर मध्ये एक हो।
डेलीमोशन भिडियो डाउनलोडर अनलाइन 1080p 2021